Panoragram को साथ इन्स्टाग्राममा सिमलेस पानोरामिक फोटो कसरी पोष्ट गर्ने ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राममा सिमलेस पनोरमिक फोटो कसरी राख्ने
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | सामान्य, ट्यूटोरियलहरू
पक्का के तपाईंले लामो फोटोहरूको केही इन्स्टाग्राम पोष्टहरू कटौती बिना नै देख्नुभयो? कुनै छुटाना छैन। तपाईंले देख्न सक्नुहुने फोटोहरू बाँयाबाट दाँया स्क्रोलिling। केहि चीज जुन केही फोटोहरू प्रकाशित गर्न उपकरणको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ र यसले तपाईंको खातामा अत्यन्तै हड्तालजनक स्पर्श दिन्छ। Panoragram सबै भन्दा उपयुक्त अनुप्रयोग हो यसको लागी।
Hoy हामी व्याख्या गरौं एक पछि अर्को कसरी तपाइँ तपाइँको इंस्टाग्राममा Panoramic फोटो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ती महान देखिन्छन्। एकल पोष्टमा धेरै फोटोहरू प्रकाशित गर्न विकल्पबाट अधिक प्राप्त गर्न विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको अनुप्रयोगलाई धन्यवाद छ। हामी कसरी प्रयोग गर्ने बारे सबै कुरा बताउँछौं पानोराग्राम.
1 Panoragram हामीलाई इंस्टाग्राममा Panoramic फोटोहरूको साथ मद्दत गर्दछ
2 Panoragram कदम कदम पछि प्रयोग गर्नुहोस्
2.1 छवि चयन गर्नुहोस्
2.2 अनुप्रयोगबाट लोगो हटाउनुहोस्
2.3 इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नुहोस्
2.4 यो हाम्रो प्रकाशन हो
3 Panoragram, एक गुणवत्ता बोनस तपाईंको इंस्टाग्राम खातामा
Panoragram हामीलाई इंस्टाग्राममा Panoramic फोटोहरूको साथ मद्दत गर्दछ
यदि तपाईंले अहिलेसम्म यो आवेदनको बारेमा सुन्नु भएको छैन भने, आज हामी तपाईंलाई यसको बारेमा सबै भन्नेछौं। छन् धेरै अनुप्रयोगहरू जुन स्वदेशी इन्स्टाग्राम उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष रूपमा समर्पित गरिएको छ. सबैभन्दा सफल, र अझै पनि हो, एक हो "पुन: पोस्ट" जसको साथ हामी हामीमा अर्को खाताको प्रकाशन "पुनः पोस्ट गर्न" सक्छौं।
सफ्टवेयर विकासका लागि धन्यबाद, बाह्य अनुप्रयोगहरू सक्षम छन् फोटोग्राफी को प्रेमीहरु को लागी आवेदन पार उत्कृष्टता द्वारा प्रदान की संभावनाहरु को विस्तार। अधिक र अधिक व्यक्ति प्रायोजकहरू वा विज्ञापन गर्न इन्स्टाग्राममा व्यस्त छन्। यसका लागि तिनीहरू सधैँ खोजिरहेका हुन्छन् मूल खाताहरू अन्य खाताहरूबाट बाहिर खडा गर्न र फरक पोष्टहरू बनाउनुहोस्।
फोटोको गुणस्तर वा शट्सको कठिनाई पछाडि, कम कम प्रकाशनहरू पाउन रोचक हुन्छ। हामीले अनुप्रयोगहरू देख्यौं जुन सिर्जना गर्दछ, एकल फोटोलाई धेरै ग्रिडमा विभाजन गरेर र धेरै प्रकाशनहरू बनाएर, ठूलो फोटो जुन प्रोफाइलमा मोजेकको रूपमा देख्न सकिन्छ। Panoragram लाई केवल एक पोष्ट चाहिन्छ र तपाईले देख्नुहुनेछ कि परिणामहरू एकदम राम्रो छन्।
Panoragram कदम कदम पछि प्रयोग गर्नुहोस्
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा, हो, हो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। र महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौं नि: शुल्क अनुप्रयोग। यो पनि विज्ञापन छैन "अनिवार्य", यद्यपि यदि हामी हाम्रो अन्तिम प्रकाशनमा अनुप्रयोगको वाटरमार्क नभएको चाहान्छौं भने हामीले 30० सेकेन्डको विज्ञापन भिडियो हेर्नुपर्नेछ।
एकचोटि हामी अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस्, तिनीहरू स्वचालित रूपमा हामी हाम्रो रीलमा भएका सबै पानोरामिक फोटोहरू चयन गर्न सक्षम हुनेछन् चित्रहरु को। यदि हामी बहु प्रकाशन प्रयोगमा कटौती बिना प्रकाशित गर्न चाहेको फोटो देखा पर्दैन भने, यो किनभने यसको मापन पनोरमिक फोटोमा फिट हुँदैन। यसको लागि, यसलाई माथि र तल (तेर्सो) बाट ट्रिम गर्न सल्लाह दिइन्छ ताकि यसको अधिक लम्बाइ भएको आकार होस्।
हामी छवि छनौट गर्दछौं जुन हामी हाम्रो बीचमा उपलब्ध विकल्पहरूको बीच प्रकाशित गर्न चाहन्छौं। स्क्रिन जुन अनुप्रयोगले हामीलाई देखाउँदछ त्यसरी नै छ।
एक पटक चयन गरियो छवि, निर्देशनहरू अनुसरण गर्न ताकि हाम्रो प्रकाशन तपाइँले चाहानुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। जब इच्छित तस्बिर चयन गर्दा, अनुप्रयोग आफैंमा यसलाई दुईमा विभाजन गर्न जिम्मेवार छ वा अधिक आवश्यक भएमा आकारमा निर्भर गर्दछ। त्यसो भए हामीले बहु प्रकाशनमा क्लिक गरेर चयन गर्नुपर्नेछ र सही क्रममा बनाइएको फोटो भागहरू चयन गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगबाट लोगो हटाउनुहोस्
जब अनुप्रयोग हामीलाई पूर्वावलोकन देखाउनुहोस् हामी कसरी अनुप्रयोगमा पनोरमिक छवि देख्ने छौं, यो यो Panoragram अनुप्रयोग को नाम संग एक छोटा वाटरमार्क सम्मिलित छ। जस्तो कि हामीले सुरुमा तपाईंलाई भनिसकेका छौं, पनोरग्राममा विज्ञापन छैन। तर यदि हामी अनुप्रयोगबाट लोगो हटाउन चाहन्छौं भने हामी -० सेकेन्डको विज्ञापन भिडियो हेरेर त्यसो गर्न सक्दछौं। यदि तपाईं आफ्नो छवि चिन्ह लगाउन चाहानु हुन्न भने, यो एक उचित मूल्य देखिन्छ। अन्य अनुप्रयोगहरूले मात्र यो गर्छ यदि हामी सशुल्क संस्करणहरू डाउनलोड गर्छौं।
एकचोटि हामीले बटनमा क्लिक गर्‍यौं "लोगो हटाउनुहोस्" स्क्रीन देखा पर्नेछ जहाँ विकल्प देखिन्छ "अहिले हेर्नुहोस्"। सानो विज्ञापन भिडियो प्ले हुनेछ, जुन फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित अन्य अनुप्रयोगहरूसँग पनि सम्बन्धित छ second० सेकेन्ड काउन्टडाउनको साथ। एक पटक तिनीहरू पारित गरे हामी यो देख्नेछौं कि लोगोबिना हाम्रो तस्बिर कस्तो देखिन्छ Panoragram द्वारा।
इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नुहोस्
यो समय हाम्रो अप्रमाणित Panoramic शट इंस्टाग्राममा पोस्ट गर्ने समय हो। यसको लागी "इन्स्टाग्राममा सेयर गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। अब अनुप्रयोगले हामीलाई सोध्यो यदि हामी कथाहरू वा समाचार सेक्सनमा प्रकाशन गर्न चाहन्छौं। तार्किक हामीले प्रकाशित समाचार चयन गर्नुपर्नेछ जहाँ हामी हाम्रा पनोरमिक फोटो कटौती बिना नै देख्न सक्छौं।
यो हाम्रो प्रकाशन हो
यो सकियो, यो सुपर सजिलो छैन? यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि इन्स्टाग्रामको साथ यस प्रकारका प्रकाशनहरू बनाउन सक्षम हुन तपाईलाई ठूलो ज्ञान, वा केही विशेष प्रकारको प्रोग्रामको आवश्यक छ भने, तपाईले प्रमाणिकरण गर्नुहुनेछ कि तपाईले गर्नुहुन्न। एकल Panoragram डाउनलोड गर्दै र यी सरल चरणहरूको अनुसरण गर्दै तपाईं एक गुणवत्ता प्रकाशन मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
Panoragram, एक गुणवत्ता बोनस तपाईंको इंस्टाग्राम खातामा
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको इन्स्टाग्राम खातामा एक गुण पोइन्ट प्रस्ताव गर्नु कुनै गाह्रो छैन। हामीले तपाईंलाई आज देखाइएको जस्तै प्रकाशनहरू हेर्नुहोस् तिनीहरू एक धेरै पेशेवर छवि प्रदान गर्दछ यदि तपाईं आफ्नो व्यापार बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने। र पनि धेरै तपाईंको निजी खाता को उपस्थिति सुधार गर्दछ Panoramic तस्विर बिना कटौती बिना ध्यान आकर्षित गर्दछ।
तपाईंले अहिले सम्म अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुभएको छैन? यहाँ हामी तपाईंलाई लिंक छोड्दछौं।
विकासकर्ता: Duck Dev। SA
तपाईंको जुम भिडियो कलहरूमा भर्चुअल पृष्ठभूमि थप्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » इन्स्टाग्राममा सिमलेस पनोरमिक फोटो कसरी राख्ने
Sonos ले आर्क, एक अविश्वसनीय साउंडबार र अधिक उत्पादनहरू सुरू गर्दछ
आरसीएस के हो र यसले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ